133 लागि परिणाम zombie games
यो दुष्ट-जस्तो रंगशालामा आधारित शूटर मा लाश को अनन्त hordes बन्द लड्न। , लाश द्वारा रन भन्दा एक स्थान स्टेशन अन्वेषण र हतियार अपग्रेड गर्नुहोस् र आफ्नो लडाई मा तपाईं सहायता सुपर सैनिकहरु को एक टीम भेला किन्न। तपाईं कसरी लामो हुनेछ?
ट्रकिंग Halloween लाश
यो लाश शहर कब्जा गरेको छ, र मात्र तीन मानिसहरू बचे। अब तिनीहरूले टाढा छिटो तिनीहरूले गर्न सक्छन् रूपमा मिसिन बन्दुक र अन्य खतरनाक toyw साथ सशस्त्र भारी सेना ट्रक संग जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईं टाढा प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई मदत गर्नेछ?
despicable मलाई 2013 खेल
टोली आत्मा शो आफ्नो टाउको मा झर्ने छन् भनेर बम द्वारा मारा गर्न होसियार हुन, युद्धको अगाडि लाइनमा घाइते र आवश्यक सबैलाई Minions उद्धार गर्न उद्धार गर्न ....
को लाश आगो
अब आफ्नो काम आफ्नो शहर मा पागल जाँदैछन् जो सबै लाश मार्न छ। चोट पुर्याउने बिना लाश शूटिंग द्वारा सकेसम्म लामो समयसम्म लागि बच्न। प्रत्येक स्तर को अन्त्यमा सिक्का तपाईंको स्वास्थ्य स्तरवृद्धि गर्नुहोस्। खेल निर्देश: प्रयोग माउस टी
बनाम लाश बिरुवाहरु: बिरालो युद्ध
एउटा एकदमै रोचक खेल, बिरालोहरु लाश मार्न छन् तपाईं यसको लागि तयार आएको,?
एक तरिका पत्ता लगाउन क्रममा लाश को hordes मार्फत आफ्नो बाटो लड्न। के तपाईं फिर्ता सैलून गर्न चलान आवश्यकता जाँदैछन् बारूद सकिएको हुँदा तिनीहरूलाई बाहिर लिन, तर बाहिर हेर्न आफ्नो हतियार अपग्रेड गर्नुहोस्। तपाईं आराम किन लिने छैन र मिनी-G मा जाने छ
एक शूटर खेल। तपाईं एक Rambo-उस्तै Commando छन्, र आफ्नो उद्देश्य दुष्ट लाश यो कब्जा गरौं छैन क्रममा आफ्नो फोर्ट रक्षा गर्न छ। एउटा अचम्मको कुरा आफ्नो शूटिंग कौशल जाँच गर्न र रमाइलो गर्न!
डिक शावर प्रेत भूमि
विभिन्न undead लाश गोली मार छ घन्टी बीच र बुझ्छ सजिलो केहिपनि यी प्राणीहरू झगडा बाहिर हेर्न त आफ्नो सबै प्रतिभा देखाउन
प्रेत विद्रोह। प्रेत विद्रोह game.You शूटिंग खचाखच भरिएको एउटा कार्य मरेका island.Your उद्देश्य तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न आफ्नो बाटो मा लाश गोली छ प्रविष्ट गर्नुभएको छ। तपाईंको कमाएको पैसा भण्डारमा आफ्नो हतियार अपग्रेड गर्नुहोस्। नयाँ हासिल
प्रेत रिप यो खेलाडी को उद्देश्य लाश मार्न र अतिरिक्त अंक कमाउन कपाल संकलन गर्न छ जहाँ एक रोचक खेल शूटिंग छ। प्लेयर दिइएको जीवन सीमित रकम भित्र स्तर पार गर्न आवश्यक छ।
के तपाईं आफ्नो जीवन बचाउन र यसको मिशन मा अगाडी सार्न चाहनुहुन्छ भने अगाडी झूठ सबै लाश शूटिंग द्वारा अँध्यारो बाटो पछ्याउन हुनेछ सुपर महत्त्वपूर्ण जहाँ तरखरमा हुनुहुन्छ।
सुपर लाश शिकारी
यो लाश को कब्रिस्तान देखि बढ्दो छन्। तिनीहरू जमीनमा देखि बाहिर आ र मान्छे हमला गर्दै छन्। आफ्नो बन्दूक बाहिर पुल र ती सबै मार्न। ती लाश हत्या मदत गर्ने कब्रिस्तान भएका आफ्नो मित्र मार्न छैन।
लाश मृत सिमसार
तपाईं लाश को marsh.A समूह हराएको तपाईं मार्न खोजेको छ, र तपाईं तिनीहरूलाई मार्न छ! लक्ष्य र आफ्नो टाउको गोली। सार्न तीर कुञ्जीहरू प्रयोग र स्पेस पल्ट गोली। Recharge सिफ्ट। प्रेस नम्बर 1 -2-3 -4 -5 को बन्दुक चयन गर्न।
बेन 10 विदेशी प्रेत शट
बेन 10 कुनै पनि निर्देशन मा गोली मार गर्न सक्छन् भनेर मोटरबाइक पछाडि एक मेशिन गन आफ्नो tanked मोटरबाइक ड्राइभिङ छ। यो प्रेत देशमा मा हमला गर्दै छन् र तिनीहरूले बाटोमा सबैलाई दु: ख। Ben10 हरियो ऊर्जा सङ्कलन गरेर सबै प्रेत मार्न मदत
Spongebob गोली मार प्रेत
मदत Sponebob गोली मार स्याउ गरेको यो हास्यास्पद खेल मा लाश टाउको र अर्को स्तर बन्द।
लाश मृत भूमि
लाश संक्रमण आफ्नो मिशन तिनीहरूले शहर .... राम्रो किस्मत पुग्न अघि सबै सैन्य लाश नष्ट गर्न छ, धेरै छिटो सम्पूर्ण नाजी सेना संक्रमित गरिएको छ फैलाउने छ !!
नरक2मा jacko
Jacko हेलोवीन को ठूलो आत्मा बोलाउन आवश्यक छ। नयाँ चुनौतीहरू र नयाँ खतराको उहाँले आफ्नो सबैभन्दाअध्यारो मिशन पूरा गर्नेछ
आम तबाही - प्रेत apocalypse
जनसंचार तबाही श्रृंखला मा एक नयाँ रक्तपातपूर्ण खेल यहाँ छ! संसारलाई घातक भाइरस संक्रमित गरिएको छ पछि, सबैलाई freakin कुरूप लाश मा खोल्दै छ। तर एक मुक्तिदाता एक पटक र सबै को लागि यो किरा हटाउनेछ ... तपाईं! तपाईंको इन्धन ट्यांक सुरक्षित, उन्नयन
नौकर बनाम लाश
नौकर उहाँले लाश मारिरहेको छ यो समय, फिर्ता छ अब, प्रत्येक स्तर मा लाश को दिइएको नम्बर squish र अन्य रोमाञ्चक स्तर र उपलब्धिहरू अनलक।
मानव जाति वा गाढा रेस बीच आफ्नो दौड चयन र हावा, समुद्र र भूमि द्वारा शत्रु क्षेत्रमा प्रवेश!
पहाडी ड्राइभ तपाईं इन्धन संरक्षण रूपमा। लिनुहोस् सिक्का यो दूरी खेल मा अपग्रेड खरिद गर्न।
एक बग्गीमा संग पहाडहरू ड्राइभ। धेरै सावधान रहनुहोस् र तपाईंले आफ्नो चरम ड्राइभिङ skils मदत गर्न सक्छ हरेक चरण जित्न सक्छौं। तपाईंको स्कोर वृद्धि गर्न अंक सङ्कलन। आफ्नो अंक वृद्धि गर्न चाल गर्नुहोस्।
शक्ति RANGER डिनो रातो एटीवी
लाल डिनो Rangers नयाँ एटीवी पागलपन!
amy winehouse escape
Our game world-famous British singer Amy Winehouse wants to escape from the rehabilitation center, but not like there, too. Rehabilitation center staff is pursuingafast fun with it
बग युद्ध 2
लक्ष्य गोली मार
यो आँखा हिट को एक सुधार खेल हो। तपाईं छिटो गोली र सही लक्षित मारा गर्न सक्नुहुन्छ? यो नि: शुल्क अनलाइन खेल शूटिंग तपाईं को लागि एक सही चुनौती हो। तपाईंले यसलाई प्ले गरेर आफ्नो कौशल अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। रमाइलो गर!